Raharaha fakana an-keriny – Anjozorobe: nirefotra ny basy, “zazamena” roa lavon’ny zandary | NewsMada
Na efa nisy aza ireo voasambotra, mitohy ihany ny fampihorohoroana amin’ny alalan’ny fakana an-keriny sy fanaovana takalon’aina ataon’ny andian-jiolahy, antsoina hoe “zazamena”. Roa tamin’ireto farany izay naka an-keriny olona efatra no lavon’ny zandary, omaly.
Mirongatra ny asan-dahalo. Nirefotra ny basy, nampihorohoro indray ny dahalo, omaly maraina tao Ambohibary, kaominina Betatao, distrikan’Anjozorobe. Nitrangana fakana an-keriny tao an-toerana omaly maraina tokony ho tamin’ny 6 ora. Lasan’ireo andian-dahalo nirongo basy tamin’izany ny olona miisa efatra, izay nahitana vehivavy iray sy lehilahy telo.
Nanapoaka basy avy hatrany ireo dahalo vantany vao niditra ny tanàna, tao anatin’izay, lasan’ireo olon-dratsy ireo olona miisa efatra, misy rohim-pihavanana avokoa, hoy ny fanazavan’ny zandary ao an-toerana. Taorian’izay, nanara-dia avy hatrany ireo fokonolona sy ny mpitandro filaminana. Omaly hariva tokony ho tamin’ny 5 ora, nisy ny fifampitifirana teo amin’ireo olon-dratsy sy ny zandary. Lavo tamin’izany ny zazamena miisa roa. Hatramin’ny ora nanoratanay farany, mbola anatin’ny fanarahan-dia ireo zandary. Tsy mbola misy ihany koa fitakiam-bola nataon’ireo olon-dratsy.
Raha ny fantatra, nirongo basy mahery vaika sy basim-borona miisa dimy teo ho eo ireo olon-dratsy. Mitohy ny fanadihadiana.
Avotra ny ankizilahikely iray
Tra-tehaky ny zandary ny iray tamin’ireo mpanao takalonaina tao Fandriana, ny asabotsy teo. Mbola voamarin’ilay lasibatra ihany koa fa isan’ireo nandray anjara mivantana tamin’ny asa ratsy ilay jiolahy tratra io. Tsiahiviana fa ankizilahikely iray sahabo ho 8 taona no nisy naka an-keriny, ny asabotsy 24 avrily teo, teny an-tsaha, tao amin’ny distrikan’i Fandriana, hoy ny loharanom-baovao iray. Tsy voafaritra mazava ny isan’ireo olon-dratsy ary nitaky vola mitentina 4 tapitrisa Ar ireo jiolahy ho famotsorana azy. Tsy vitan’izay fa mbola nandefa taratasy tany amin’ireo fianakaviany ihany koa ireo olon-dratsy. « Aty aminay ny zanakareo ka mitaky vola 4 tapitrisa Ar izahay ka aterina ety Ankaramainty io vola io », io ny hafatr’ireo olon-dratsy tao anaty taratasy. Nampiany ihany koa fa vonoin’izy ireo ilay ankizilahy raha mampandre ny mpitandro filaminana ireo fianakaviana. Vokany, niditra an-tsehatra ny zandary ka nanokatra fanadihadiana. Taorian’izay, navotsotr’ireo dahalo ilay ankizilahy, ny asabotsy teo. Voalaza ihany koa fa nandoa vola ihany koa ireo fianakaviana. Nitsoaka tany amin’ny dadatoany kosa ilay lasibatra raha navotsotr’ireo mpanao takalonaina ary naterina tao amin’ny ray aman-dreniny, taorian’izay. Mbola mitohy ny fikarohana ireo naman’ilay voasambotra.